China N'ogbe 4.5 igwe anaghị agba nchara mmịfe suppliers na Manufacturers - GRX mmanya (HONG Kong) CO., LTD.
.Lọ > Mkpọchi uwe isi > Igwe anaghị agba nchara YG mmịfe > 4.5 Igwe anaghị agba nchara mmịfe
Nke a 4.5YG igwe anaghị agba nchara bụ nke 304 igwe anaghị agba nchara. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo.
4.5YG igwe anaghị agba nchara mmịfe
GRX akpịrị (ogologo KONG) CO., LTD. bụ onye na-eme ngwa ngwa nke ngwaahịa zipa nwere akụkọ ntolite nke afọ 10. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro mmepụta nke a na-achịkwa nke ọma na ndị ọkachamara zụrụ azụ nke ọma.A na-akwado ụlọ ọrụ anyị: ndị ọkachamara na-enyocha ọkwa ọ bụla, nke na-ekwe nkwa mma nke zipperproducts.
1. Ntinye ngwaahịa nke 4.5YG anaghị egbu egbu
This 4.5YG igwe anaghị agba nchara mmịfe is made of 304 stainless steel. The company has passed ISO9001: 2008 quality management system certification.Ọ nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ ma webata usoro njikwa ngwaahịa zuru oke. , Nọgidere na-melite ngwaike dị iche iche na akụrụngwa, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
2. 4.5YG igwe anaghị agba nchara mmịfe product parameters (specifications)
N'ime oghere size: ọnụ elu: 2.05-2.15MM
Uwe akwa: 0.8-0.9MM
3. Product atụmatụ na ngwa nke4.5YG igwe anaghị agba nchara slider
Nke a na-anaghị agba nchara ihe mmịfe na-akasị eji jeans zipa, nke nwere uru n'elu ego ọla kọpa.
4. Nkọwa ngwaahịa banyere 4.5YG igwe anaghị agba nchara
Ihe mmịfe a nwere ike ịhazigharị ibu ọrụ (dịka 780 PC / KG, 860 PC / KG) dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, tinyekwa LOGO nke onye ahịa chọrọ.
5. Nlere ngwaahịa nke 4.5YG anaghị egbu egbu
6. Nkwakọ ngwaahịa na mbupu nke 4.5YGstainless steel slider
Tags na-ekpo ọkụ: 4.5 Igwe anaghị agba nchara mmịfe, China, N'ogbe, Bulk, Suppliers, Manufacturers
4 Igwe anaghị agba nchara mmịfe
5 Igwe anaghị agba nchara mmịfe